Imibuzo ngekusasa lomqeqeshi weBucs - Ilanga News
Home Ezemidlalo Imibuzo ngekusasa lomqeqeshi weBucs
Imibuzo ngekusasa lomqeqeshi weBucs
Isikhulu sePirates sikhuza ibhadi ‘ngeyokugxambukela kukaScreamer’
SENZO SOKHELA, MFANAFUTHI NDLOVU noPHILANI NCALANE
USTANLEY “Screamer” Tshabalala oyisikhulu ehlebela okuthile uHappy Jele ongumdlali wePirates eqeqeshwa nguJosef Zinnbauer ngesikhathi ibhekene neCape Town City ngoMgqibelo.
KUQUBUKE imibuzo ngekusasa likaJosef Zinnbauer ongumqeqeshi we-Orlando Pirates kubonakala uStanley “Screamer” Tshabalala ongesinye sezikhulu zale kilabhu edlulisa imiyalelo kuHappy Jele obesebhentshini le kilabhu icazelana amaphuzu neCape Town City kuba ngu-2-2 koweDStv Premiership ngoMgqibelo ntambama eDanie Craven Stadium, eStellenbosch.
Kulo mdlalo kubonakale uScreamer ongenye yezimenenja zeBucs, ehlebela umyalelo othile uJele obesohlwini lwabadlali abasebhentshini, ekhomba nasenkundleni, kubonakala ukuthi kukhona angajabulile ngakho. Ophenyweni olufushane olwenziwe yileli phephandaba, lithole ukuthi lesi sikhulu besingeneme ngamasu kaZinnbauer. Abadlali abasebhentshini sebehlala ephavaliyoni njengoba kusabhoke iCovid-19.
Umthombo weLANGA oncikene neBucs, uthe: “Liloliwe izembe kuZinnbauer, izikhulu kazeneme ngemiphumela nangamasu akhe.
“Sezimazisile ukuthi uma engashintshi ukwenza kukhona okusina kumjeqeza. Into ekhalisa kakhulu abaphathi wukuthi lo mqeqeshi kasikho isikhali angatholelwanga sona kodwa nguyena ohluleka wukuzisebenzisa.”
Imizamo yokuthola uScreamer ukuzwa ukuthi yini le engaka abeyihlebela uJele, iphunzile njengoba ucingo lwakhe belungangeni. UFloyd Mbele ongesinye sezikhulu zeBucs, utshele ILANGA izolo ukuthi ubekhona enkundleni kodwa akasibonanga lesi sigameko.
“Noma-ke kungathiwa (uScreamer) ukhulumile noJele, kungani pho uthi lokho bekuwukugxambukela? Kangiyazi nje eyokugxambukela (emsebenzini wabaqeqeshi bePirates). Bengikuwona lo mdlalo, le nto oyishoyo kangiyazi,” kusho uMbele.
Phambilini sekuke kwavela kaningana ukuthi kukhona ukugxambukela emsebenzini wabaqeqeshi kule kilabhu.
UKjell Jonevret waseSweden owake wacija iBucs, waphumela obala eseshiyile kule kilabhu ukuthi ubeqala ngqa empilweni yakhe ukusebenza endaweni lapho kugxanjukelwa khona bukhoma emsebenzini womqeqeshi.
No-Owen Da Gama wake wabamba ucingo esebhentshini kuqhu-beka umdlalo esacija iPirates, kucaca ukuthi wayenikwa umyalelo omqoka engakwazi ukuluziba ucingo.
Nangesikhathi iBucs ihlulwa yiPlatinum Stars kowamanqamu weMTN8 eThekwini, ubengekho u-Andile Jali esikimini esiqala umdlalo, kodwa wavumbuka enkundleni, okuhumusheka ngokuthi kukhona ukungenelela okube khona.
Omunye wabaphathi asebemnkantshubomvu kunobhutshuzwayo okhokhelayo wakuleli, ukubeke kwacaca ukuthi vele kukhona abagxambukela emsebenzini wethimba labaqeqeshi.
“Ungakhohlwa wukuthi uScreamer uke waba ngumqeqeshi. Umuntu oke waba ngumqeqeshi uyathanda ukuzisondeza ebhentshini. Ngaphezu kwalokhu, uyingxenye yokuthengwa kwabadlali kwiPirates, okwenza bamuzwe kalula. Okunye okuthikameza abaqeqeshi kwiPirates wukuthi u-Irvin Khoza onguSihlalo akayihambeli imidlalo, okunika uScreamer nabanye ithuba lokuba yiso lakhe. Lokhu-ke kwenza ithimba labaqeqeshi lingasebenzi ngokukhululeka. UKhoza unabeluleki abaningi,” kusho lesi sikhulu.
IPirates izokuba nomdlalo omqoka neBloemfontein Celtic wamanqamu weMTN8 ngoMgqibelo ngo-18h00 eMoses Mabhida Stadium, eThekwini.
Previous articleKubatshazwa isihluku iphoyisa lesifazane “lidubula libulala owesilisa”
Next articleOTHISHA ECALENI LOKUBULALA ABEBEMSOLA NGOKWEBA I-RICE NAMAFUTHA